Qatar Airways ayaa dib u bilawday duulimaadkeedii Mykonos
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Qatar Airways ayaa dib u bilawday duulimaadkeedii Mykonos
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Giriigga • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Safarka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Jasiiradda Giriigga ee Mykonos waxay isu diyaarineysaa Soo-dhaweynta Martida xagaaga
Jasiiradda Griigga ee caanka ku ah mashiinnada dabaysha iyo jawiga saaxiibtinimo ayaa mar kale u furmaya martida
Qatar Airways ayaa duullimaadkeeda casriga ah ee mataanaha ah A320 duuli doonta saddex jeer usbuucii
Qatar Airways waxay isku xiri doontaa Mykonos in ka badan 35 magaalo oo ku yaal Aasiya iyo Bariga Dhexe
Diyaaradda Qatar Airways ayaa dib u bilaabaysa adeeggeeda magaalada Mykonos, Griiga xagaaga iyadoo jasiiraduhu ay soo dhaweynayaan martida markale. Shirkada diyaarada ayaa qorsheyneysa inay sameyso seddex duulimaad usbuucii iyadoo adeegsaneysa diyaarad casri ah A320 oo ka kooban 12 kursi oo ah Class Class iyo 120 kursi oo ah Class Class.
Warka waxaa soo dhoweeyay Kooxda Qatar Airways Madaxa Fulinta, Mudane Mudane Akbar Al Baker, oo yiri: “Waxaan markii ugu horreysay bilownay inaan u duulno magaalada Mykonos bishii Maajo 2018, wadadaasina waxay noqotay mid aad u caan ah macaamiisheenna. Maaddaama uu jiro aafada adduunka, waxaan ku khasbaneyn inaan joojino adeegii xagaagii la soo dhaafay sidaa darteed waxaan runtii ku faraxsanahay inaan laabaneyno taakuleynta dadaallada Giriigga ee dib u bilaabista dalxiiska.
“Waan ognahay in mas'uuliyiinta Giriigga ay qaadayaan taxaddarro si loo hubiyo amniga bulshada, dadka soo booqdana waxaa looga baahan doonaa inay u hoggaansamaan tallaabooyinka caafimaadka bulshada ee la fiirinayo aafada faafa. Sidoo kale waxaan ilaalin doonnaa heerarkeenna aadka u sarreeya. Qatar Airways ayaa ahayd shirkaddii ugu horreysay ee caalami ah ee adduunka ee gaarto sumcadda 5-Star COVID-19 ee Qiimaynta Badbaadada Diyaaradaha ee Skytrax. Waxaan rajeyneynaa inaan sii wadno inaan siino khibrada ugu macquulsan ee safarka adduunka oo dhan, isla markaana aan ku sii ballaarinno doorka aan ka geysaneyno dib u soo kabashada warshadaha duulista ganacsiga. ”
Wasiirka Dalxiiska ee Giriigga, Harry Theoharis, ayaa yiri: “Waan ku faraxsanahay inaan ku soo dhoweeyo Qatar Airways dib ugu laabashada Mykonos. Aad bay noo farxad noo tahay in lagu daro qorshahayaga qaaliga ah ee loogu tala galay barnaamijka cusub ee xagaaga. Waqtigan adag horumarintani waxay timaaddaa markii dhammaan dadaalkeenna la geliyay furitaanka nabadgelyada ee dalxiiska Griiga. 'Waxa kaliya ee aad rabto waa Giriigga' waa hal-ku-dhiggeenna cusub, tanna waxaan ku martiqaadaynaa saaxiibbada Qatar Airways, oo ka kala socda adduunka oo dhan inay na soo booqdaan.
Jadwalka Duulimaadka Mykonos: Isniinta, Jimcaha, Sabtida
Doha (DOH) ilaa Mykonos (JMK) QR311 waa baxayaa: 07:30 timaado: 12:05
Mykonos (JMK) ilaa Doha (DOH) QR312 wuu baxayaa: 13:05 ayaa yimid: 17:05